koa izy ireo amin’ireo karazana asa marolafy tokony hotanterahina eto amin’ny firenena. Ho an’ny asa fanabeazana ny zaza Malagasy, ohatra, dia nandray an-tanana ny fanavaozana sy ny fanatsarana ilay EPP ao Ambohimamory Itaosy, eo akaikin’ny lapa foiben’ny fiangonana FM FOI izy ireo izay kasainy hotokanana ato ho ato. Tanjon’izy ireo ny hampirisihina ireo mpianatra hazoto hianatra hatrany, hahafahana mampihena ny tahan’ny fitsoahana an-daharana an-tsekoly. Tsy latsa-danja amin’izany ny fikajiana ny tontolo iainana hahafahana miady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy hamerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso indray. Zanakazo kininina sy akasia marobe no novolen’izy ireo teny Andranomena, Arivonimamo ny faran’ny herinandro teo, notarihin’ny Apostoly Benjamina mivady. Olona miisa 5.000 no niara-nisalahy nanatanteraka izany niaraka tamin’ny fanamiana mitovy ka anisan’ireny ny fikambanan’ireo mpihaino ny Radio FM FOI. Vinavinaina hitohy hatrany izao hetsika fambolen-kazo izao ary kasaina hiparitaka manerana ny Nosy manomboka amin’ny taona 2021 any amin’ireo toerana izay misy ny fiangonana FM FOI rehetra. Nanampy maro tamin’ny fanomezana ireo zanakazo moa ny minisiteran’ny rano sy ny ala. Tsiahivina moa fa manan-danja amin’ny Baiboly ny hazo raha ny tenin’Andriamanitra no jerena satria dia heverina ho toy ny olona mihitsy izy ireny ka tsy tokony hotsinontsinoavina.